PressReader - Ilanga: 2018-02-08 - Umfundisi uxoshelwa utshwala
Umfundisi uxoshelwa utshwala
Usolwa nangokuqhulula inhlamba emakholweni
Ilanga - 2018-02-08 - Izindaba - SKHOSIPHI MTHEMBU
KUSUKE esinamathambo ngeSonto eMethodist Church, eNtuzuma, ngesikhathi amaphoyisa ehlakaza abazalwane abebexosha umfundisi.
Kubikwa ukuthi kuze kwadingeka ukuba ime inkonzo njengoba amalungu aleli bandla abethi ngeke asontise uMfu Sifiso Khuzwayo amsola ngokungaziphathi kahle ebandleni. Ngokuthola kweLANGA, sesiside isikhathi amalungu ebandla ekhala ngoMfu Khuzwayo amsola ngokuwathuka esidlangalaleni nangokudla amankwebevu.
Umthombo waleli phephandaba ongaphakathi kuleli bandla, uthi okunye obekucasula abazalwane wukuthi uMfu Khuzwayo uke washaya isiphihli somcimbi esontweni obekuphuzwa utshwala kuwona, okuyinto engehlanga kahle emalungwini ebandla. Kuthiwa kubikiwe lokho kubaholi bebandla kodwa kwangathathwa izinyathelo, okwenze amalungu ebandla angabe esayingena ekaMfu Khuzwayo.
Umthombo waleli phephandaba uthi bekulindeleke ukuba kube ngomunye umfundisi ophatha inkonzo, kodwa kuthe uma kusukuma uMfu Khuzwayo eya phambili eyoshumayela, abazalwane bavele baziqalela iculo, bangayingena eyakhe.
Uthi isimo bese sisibi ngendlela yokuthi kuze kwadingeka ukuba kubizwe amaphoyisa abezokhipha abazalwane endlini yesonto.
“UMfu Khuzwayo vele ngumuntu ongaziphethe kahle ebandleni, kunesigameko lapho ayenze khona umcimbi ayethi ugubha usuku lwakhe lokuzalwa lapho bekuphuzwa khona utshwala ngaphakathi emagcekeni ebandla.
"Siyile kubaphathi siyobika ngalokhu kodwa bamthola engenacala. Okunye abantu abakhala ngakho wukuthi uke wachapha abazalwane ngenhlamba ngaphandle kwesizathu.
"Kugcine kuvunyelwene ngo- kuthi uma eke washumayela nje, kuvele kuqalwe iculo kuze kube kuyabonakala ukuthi akasadingeki ebandleni,” kusho umthombo.
Omunye umthombo okuleli bandla, uthi ngePhasika lanyakenye kwenzeke okufanayo ngesikhathi kunenkonzo ebisoThongathi.
Uthi nakhona lapho abazalwane bavele baziqalela iculo ngesikhathi ezama ukushumayela ngoba benga- hambisani nalokhu. “Njalo uma kwenzeka le nto, uvele athinte amaphoyisa akwamasipala afike azosihlakaza,” kusho umthombo.
UMbhishobhi Linda Mandindi ophethe isiyingi saleli bandla, iNatal Coastal, uthe uyazi ngesigameko esenzeke ngeSonto. Uthe namacala okukhulunywa ngawo uyawazi abikiwe phambilini kodwa uMfu Khuzwayo watholakala engenacala.
“Emuva kwalokho, bazwakalise ukungenami kwabo ngesinqumo bakubika nalokho kanti okwamanje udaba luyasetshenzwa kulandelwa imigudu efanele.
"Inkinga abanayo abantu wukuthi kabafuni ukubekezelela ikomidi elibhekene nokusebenza isikhalo sabo, bajahe ukuba umfundisi ahambe ebandleni.
"Kumele sikuqonde ukuthi yonke indawo umuntu uba msulwa aze atholwe enecala, udaba lwabo siyalwazi futhi luyasetshenzwa,” kusho yena.
Ebuzwa mayelana nokuphuza utshwala, uthe ngokwenkolo yobuKristu bafundisa abantu ukuba bazithibe, bangenzi into ezokwehlisa isithunzi sebandla. Mayelana nokuphuzwa kotshwala emagcekeni ebandla, uthe umthetho kawukuvumi lokho. Imizamo yokuthola uMfu Khuzwayo kayiphumelelanga.
ILANGA liye emzini wakhe kwathiwa akekho. Lizamile ukumshayela kumakhalekhukhwini wakhe kodwa nakhona kwaze kwavuthwa amatshe engatholakali.
LAPHA kungesikhathi amaphoyisa ekhipha abazalwane eMethodist Church abebekhala ngoMfu Sfiso Khuzwayo abamsola ngokungaziphathi kahle.